संकट, षड्यन्त्र र सम्भावना – eratokhabar
ई-रातो खबर २०७८, १० असार बिहीबार २०:१९ June 26, 2021 1512 Views
सामाजिक फासिवादी सरकारको प्रतिबन्ध फिर्तापछि हामी प्रतिरोध संघर्षको मोर्चालाइ थाती राखेर शान्तिपूर्ण रुपमा जनताको बिचमा गइरहेका छौं । र यो सन्धर्भ शासक र जनता बिच कायम रहेको भीषण अंतर्विरोध सिद्दान्तत एकता र संघर्षको नियम हुँदै त्यसमा पनि मुख्य पक्ष संघर्ष बन्दै एउटा क्रमभंगता सहित मात्राको गुण तर्फ क्रमभंग भएको सन्धर्भ हो । हाम्रो गुण भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हो ।
पदार्थ वा परिघटनाको मार्क्सवादी द्वन्द्वात्मकता अनुसार यसको श्रींखला यसरी नै बिकास हुन्छ । र एउटा यस्तो स्थिती पैदा हुन्छ त्यतिबेला सामाजिक सत्ताको पुरानो तत्वलाइ पुर्ण रुपमा निषेध गर्दै नंयाले स्थान लिने छ । र त्यंहा सम्मको सम्पुर्ण नेतृत्व गुणले प्रदान गर्ने छ । यतिबेला उक्त गुण नेपालि समाजमा घटित नंया सामाजिक परिघटनामा ब्यक्त क्रमभंगतालाइ संबोधन गर्ने तहमा जनमतसंग्रहको कार्यनितिक प्रस्ताव दिएर जनताको बिचमा उपस्थित छ ।
वर्गसंघर्षमा बर्गहरुको विश्लेषण , दुई बिपरित बर्ग बिचको एकता र संघर्ष, त्यसको मात्रात्मक अवस्थाबाट गुणमा रुपान्तरण हुने स्थिती र पुरानोलाई निषेध गर्दै नंयाले स्थान लिने बैज्ञानिक तथ्यहरुको श्रींखलालाइ बोध गर्दा हामिले समाजको आगामी संकट र संभावनाहरु देख्न सक्छौं ।
जनमतसंग्रहको विषयलाई लिएर कयौं आशंकाहरु ब्यक्त गरिएका छन । र यस्तो बुझाइ सहित आंशका ब्यक्त गर्नेहरु कम्युनिस्ट स्कुलकै बिधार्थीहरु देखिन्छन । बस्तुको गतिशिलता अंतर्विरोध र बिकासको श्रींखलालाई आधार बनाएर पटाक्षप गर्यो भने के सहि हो के गलत हो अगाडि प्रकट भइहाल्छ । तर यहाँ त्यो कष्ट गर्नुको सट्टा अनुभवजन्य, भावनाजन्य र कंयौ भ्रमपुर्ण तर्कहरु ब्यक्त भइरहेको पाइन्छ ।
प्रथमतः नेपाली समाजको मुख्य अन्तर्बिरोध दलाल पुंजिवाद र उत्पिडित जनताका बिच रहेको र यसको समाधान बैज्ञानिक समाजवाद बाट मात्र सम्भव छ भन्ने बिसय प्रती कसैको बिमती रहेको छैन । विभिन्न ढंगले छरिएर रहेका समाज भित्रका तमाम अन्तर्बिरोध हरुलाइ हामिले सचेतता पुर्वक सांघुरो बनाउंदै दलाल पुंजिवाद र बैज्ञानिक समाजवादलाई आमने सामने बनाउनु पर्थ्यो । वर्गसंघर्षलाई पेचिलो बनाउन आम जनता र उत्पिडक सत्ता बिच स्पस्ट बिभाजन पैदा गर्नु अनिवार्य हुन्थ्यो । प्रतिरोध संघर्षको मोर्चालाइ थाती राखेर हामि शान्तिपुर्ण रुपमा जनतामा पुग्दै जनमतसंग्रहको प्रस्ताव पेश गर्दा यसले जनता र उत्पिडक सत्ता बिच स्पस्ट बिभाजन पैदा गरेको छ । र यसलाइ ब्यवस्थित छलफल, सभा र कार्यक्रमहरु मार्फत आममा पुर्याउंदा देशमा दुइवटा दृस्टिकोण, दुई प्रबृती, दुई सत्ता, दुई ध्रुब बन्ने छ । अर्थात शान्तिपुर्ण रुपमै पनि वर्गसंघर्ष पेचिलो बन्ने छ ।
दोश्रो: पुंजिवादी संसदिय ब्यवस्था पुर्ण रुपमा असफल मात्र होइन यो बैधानिक रुपमै अन्तिम पतनको संघारमा छ । बिकल्प अनिवार्य बनिरहंदा पुंजिवादि आर्थिक प्रणालिको अन्त्य गरेर बैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना हुने बलियो संभावनालाइ मोड्दै आफू अनुकुल हुने सत्ता स्थापना गर्न र नेपाली जनताको चाहानालाइ बिसयान्तर गर्ने तहमा समेत प्रतिकृयावादीहरु लागिपरेका छन । यो राजतन्त्रको पुनर्वहाली, सैनिक शासन जस्ता विषय अगाडि सार्दै ब्यक्त हुँदै आइरहेको छ । तर समाजमा रहेको अनतर्बिरोधको समाधान यसरी सम्भव छैन । मध्यावधि निर्वाचन भन्दै यसको अस्थाइ टालटुल मात्रै भएपनी गर्ने ध्याउन्नमा लागेको सत्ता अझ गहिरो संकटमा फंस्दै गैरहेको छ । बैज्ञानिक समाजवाद नै यी तमाम संकटहरुको सम्पुर्ण समाधान हो । परिस्थिती यसरी बिकास हुँदै आउनुले प्रतिकृयावादको सेवा चाकडी गर्दै आएका संसदवादी नेतृत्वहरुमा जीवन मरणको स्थिती पैदा भएको छ । समाजिक नियमलाइ पकड्दै अगाडि बढ्ने कि पछाडी हट्ने ? अर्थात प्रतिकृयावादीहरुको योजनामा लम्पट हुने कि जनआकांक्षा अनुरुप आंफुलाइ रुपान्तरण गरेर आफ्नो जीवन बचाउने ? संसदवादीहरुका अगाडि यक्ष प्रश्न खडा भएको छ र यसले अझ गम्भीर रुप लिंदै संसदवादिहरुको जिवनमा गम्भीर संकट पैदा गर्ने छ । सर्वपक्षिय सभा, अन्तर्कृया र ठुला ठुला छलफलहरुले पैदा गर्ने जनपक्षिय हुने वा जनबिरोधी बन्ने भन्ने परिस्थितिले सबै संसदवादीहरुलाई कित्ता स्पष्ट गर्न बाध्य पार्ने छ । यसले दलाल पुंजिवादलाई गहिरो संकटमा फंसाउदै कुनै गम्भीर गल्ती गर्न बाध्य पार्ने छ र यो उनिहरुको पतन श्रींखलाको अनिवार्य नियती हो । यो गल्ती पनि जनताको सत्ता स्थापना गर्ने संघर्षको निम्ति एउटा सम्भावना बोकेर नै आउने छ ।
तेस्रो: जनमतसंग्रहको प्रस्तावमा संसदवादीहरु सहमत भए बैज्ञानिक समाजवाद र संसदिय ब्यवस्थाको बिचमा निर्वाचन हुने छ । सारत यो निर्वाचन जनता र उत्पिडक सत्ता बिचको संघर्ष नै हो । विभिन्न नाम र कार्यक्रमहरु सहित जनतामा जाने र जनतालाइ भ्रमित गरि शासन सत्तामा रहंदै आएका संसदवादिहरुमा समेत यो जनमतसंग्रहले बिभाजन पैदा गरिदिने छ । उनिहरुलाइ जनताको बिरोधी दृस्टिकोण र प्रबृतिको पक्ष लिएर जनतामा जान कठिन हुनेछ । यसले पैदा गर्ने ध्रुवीकरणले रास्ट्रको नंया जीवन बारे फैसला लिनलाई सबै पक्षलाइ मजबुर गरिदिने छ । बैज्ञानिक समाजवाद कि संसदिय पुंजिवाद फैसला यसमा लिनु परेपछी स्थिती के बन्छ सहजै भन्न सकिन्छ । त्यसैले जनमतसंग्रहमा समेत बैज्ञानिक समाजवाद नै बिजयी हुने निश्चित छ ।
चौथो: अर्को तर्फ जनमतसंग्रह हुंदा अन्य मुद्धाहरु पनि आंउछन जस्तो राजसंस्था, हिन्दु धर्म इत्यादी भन्ने छ । मुख्य कुरा सत्तामा उत्पन्न संकटको प्रमुख कारण उसको आफ्नै आन्तरिक पक्ष भएपनि यति मात्र सत्य होइन कि नेपालमा वर्गसंघर्षको श्रींखलालाइ सचेतता पुर्वक हाम्रो पार्टिले संचालन गर्नु र जन मनोबिज्ञान हाम्रो द्रीस्टिकोण अनुसार नै रहनुले सत्ता संकटको पर्दापण भएको हो । यहाँ कुनै राजसंस्था को कारण, हिन्दु धर्मको कारण सत्ता संकट प्रस्फुटित भएको होइन । त्यसोहुंदा जनमतसंग्रह स्वभावैले बैज्ञानिक समाजवादलाई चुन्न वा नचुन्नमा केन्द्रीत हुने छ । तर माथी उठेका मुद्धाहरु जनमतसंग्रहमा प्रस्तावित भएर आंउदैनन भन्न सकिन्न आउन सक्छन । तर सामन्य नियम के हुन्छ भने ब्यक्तिले अगाडि हिंड्ने बाटोको मेसो पाएन भने मात्र पछाडिबाट घुम्ने हो । बैज्ञानिक समाजवाद र यसले दिने कार्यक्रमहरु नै नेपाली समाजको अगाडि हिंड्ने बाटो हो । बैज्ञानिक समाजवादी सत्ता संग आम जनतालाइ परिचित गराउनु , र हाम्रो विषयलाई इमान्दारिता पुर्वक जनतालाइ भन्नुले जनताले मेसो पाउने छन । र यो हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व हो । यसमा आत्तिनु पर्ने, भ्रमित बन्नु पर्ने आवश्यकता नै छैन । तपाइलाइ तपाइको बैज्ञानिक समाजवाद सम्पुर्ण समाधान हो भन्ने लाग्दैन ? यो प्रती तपाइ पुर्णरुपमा बिश्वस्त हुनु हुन्न ? हुनु हुन्छ भने ढुक्क हुनुस सबै खाले प्रतिगामी मुद्धाहरु जनमतसंग्रहमा घुसे पनि बिजय हाम्रो नै निश्चित छ । बरु जनतालाइ बाटो देखाउने, मेसो दिने काममा राम्रो संग लाग्नु छ । र यसको निम्ति बस्तुगत परिवेश परिपक्व छ । आत्मागत परिस्थिती छैन भन्ने कुतर्क आउने गरेका छन यो तर्क सहि छैन । हाम्रो आत्मागत अवस्था पनि बलियो छ , नब्बे केजि बोक्नु पर्ने बेला छ अनि खालि एकसय केजि बोक्ने तागतको कुरा गर्दै त्यसैलाइ आत्मागत भन्ने गलत तर्क गरेर भ्रमित बन्नु हुन्न । यतिबेला हामी संग अहिले गर्नु पर्ने कामलाई थेग्ने हाम्रो सामर्थ्य पर्याप्त छ । उत्कर्समय संघर्षमा पुग्दा हामीसंग एकसय केजि होइन एकहजार केजि बोक्ने सामर्थ्य हुने छ । हामी जनतालाइ बैज्ञानिक समाजवादी सत्ता संग परिचित गराउन सक्छौं, अगाडिको बाटो देखाउन सक्छौं । हाम्रो कुरा स्पस्ट र इमान्दारिता पुर्वक जनतालाइ भन्न पायौं र भन्यौं भने यहाँ कुनै प्रतिगामी वा यथास्थितिले मौका पाउने नै छैन ।
पांचौं: यी सबै विषयलाई केलाएरै बस्ने प्रतिक्रियावादीहरु जनमतसंग्रहलाई असफल पार्न विभिन्न षड्यन्त्र र तानाबाना बुनिरहेका छन । नेपाली समाजले अगिंकार गर्ने बैज्ञानिक समाजवादी सत्ता बाट तर्सिएर यतिबेला कंयौ सड्यन्त्र भइरहेका छन । सत्ताको गहिरींदो संकटले पैदा गर्ने संभावना क्रान्तिकारिहरुले नसमातुन भनेर पुंजिवाद सचेत छ । त्यसैले उसले परिस्थितिलाइ अस्थायी रुपमा टाल्न षड्यन्त्र गर्दैछ र संसदवादमा यसको नाङ्गो नाच देखिरहेकै छौं । अर्को तर्फ दलालपुंजिवाद सचेतता पुर्वक हाम्रो पार्टी र सरकार संग भएको तीन बुंदे सहमतिलाइ समेत असफल पार्ने चाल चलिरहेको छ । उसका यी सम्पुर्ण चाल र षड्यन्त्रहरुले उसको पतनलाई अझ नजिक बनाउदैं लाने छ । हाम्रो पार्टिका नेता कार्यकर्ताहरु छोड्ने र मुद्धा खारेज गर्ने विषयमा उसले जुन चाल चल्न खोजेको प्रतीत हुन्छ यो उसकै निम्ति प्रत्युत्पादक छ । किन कि यो विषयलाई समहती अनुरुप हल नगर्ने हो भने यसले आन्दोलनको स्वरुप ग्रहण गर्ने छ र यो आन्दोलन घनिभुत रुपमा उठ्ने निश्चित छ । जनतामा पुग्ने छन हाम्रा विषयहरु, जति जति सत्ता षड्यन्त्र गर्दै जान्छ उति उति यो मुद्धा ससक्त र दर्विलो बन्दै जाने छ अर्थात सत्ताको यो षड्यन्त्रमा पनि हामी अनुकुल नै संभावना देखिन्छ । अर्को तर्फ जनमतसंग्रहलाई हुन दिएनन भने ? यो प्रश्न महत्वपूर्ण छ । हुन नदिने , असफल तुल्याउने र षड्यन्त्र गर्ने संभावना प्रबल छ । जनमतसंग्रहले जनताको बिचमा आफ्ना सम्पुर्ण कर्तुत खोलिदिने भएपछी, जनताबाट नंग्याउने भएपछी हरसंम्भव यो हुन नदिने खेल हुन्छ नै । तर यो षड्यन्त्र पनि हाम्रो निम्ति संभावना लिएर आउँछ । किनकि, हामिले उसको षड्यन्त्र सफल हुंने स्थिती सम्म जनतालाइ बाटो देखाइसकेकै हुन्छौं । जनताको बिचमा पक्षधरता स्पस्ट भैसकेको हुन्छ । जनताले बैज्ञानिक समाजवाद चाहाने र त्यो प्राप्त गर्ने यात्रामा पाइला हालिसकेका हुन्छन । त्यतिबेला पैदाहुने षड्यन्त्रले जनमत उल्टिएर जनबिद्रोह हुने परिस्थितिको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । जनमतसंग्रह जस्तो शान्तिपुर्ण निकास खोज्ने माध्यमलाई दुत्कारेर षड्यन्त्र र अपराधकै साहरा यदि पुंजिवादी संसदवादीहरु लिन्छन भने जनताको बिद्रोहको अगाडि धुलो पिठो हुनुको बिकल्प उनिहरु संग रहने छैन ।
छैटौं: यतिबेला सिद्दान्तको आंखाले हेर्यो भने वर्गसंघर्ष एकता र संघर्षबाट मात्रालाई गुणमा रुपान्तरण गर्ने स्थितिमा आइपुगेको छ । यो भनेको दलाल पुंजिवादी सत्ताको बिकल्प बैज्ञानिक समाजवादलाइ संसदिय ब्यवस्थाको सम्पुर्ण असफलताको सम्पुर्ण समाधान बैज्ञानिक समाजवाद हो भन्ने ठांउमा ल्याइपुर्याएको छ । अर्थात वर्गसंघर्षमा उत्पिडकको सत्ता विरुद्ध उत्पिडितले खडा गर्ने सत्ता आमने सामने भएका छन । गुण अगाडि आएको छ । जब गुण अगाडि आउँछ तब पुरानोको अस्तित्व बिलोप हुने हुन्छ तथापी पुरानोले पनि आफ्नो अस्तीत्व बंचाउन हरकोसीस गर्ने छ । उसका सवै कोसिसहरु सत्यको अगाडि अर्थात माझिएर आएको, उसकै संकटको समाधान बन्न सक्ने गुणको अगाडि फिक्का साबित हुने छ । त्यसो हुंदा हामिले यतिबेला जनतालाइ आफ्नो सत्ता संग परिचित गराउने र बाटो देखाउने काम गर्नु छ । गुणलाई पुरानोको अस्तित्व बिरुद्ध बिजयी गराउन एउटा बलिदानमय संघर्षको उत्कर्स चुम्नु नै छ । हामिले त्यो उचाइ प्राप्त गर्ने महान सपना साकार पार्न निरन्तर मिहेनत गरौं । गुण अर्थात बैज्ञानिक समाजवादको बिजय आरम्भ भैसकेको छ ।